Uvalo kubazali ngabafundi baka-matric - Ilanga News
Home Izindaba Uvalo kubazali ngabafundi baka-matric
Bangenelwe yimigulukudu yababamba inkunzi njengoba bebuye baphume ngo-23:00 esikoleni
BANOVALO abazali babafundi bakamatikuletsheni waseMakhumbuza High School, eMlazi njengoba bephuma ebusuku kakhulu esikoleni.
BADLIWA yingebhe abazali babafundi baseMakhumbuza High School KwaD, eMlazi, eThekwini, okuthiwa bangenelwe yizigebengu esikoleni befunda ngoLwesihlanu ebusuku. Ngokuthola kweLANGA, abazali basola uthishanhloko ngokukhishwa kwabafundi bakamatikuletsheni ebusuku kakhulu, okuvela ukuthi baphuma ngo-23:h00. Kuthiwa lokhu kwenza impilo yabo ibesengcupheni njengoba behamba ngezinyawo uma sebegoduka. Kubikwa ukuthi ngoLwesihlanu kungene imigulukudu esikoleni, yathatha amaselula abafundi nokunye okuyizinsiza zabo zokufunda.
Omunye umzali okhulume naleli phephandaba ngaphansi kombandela wokuthi igama lakhe lingadalulwa uthi kabufiki ubuthongo ebusuku ngoba basuke bengasazi isimo sabafundi endleleni uma sebebuya esikoleni. “Izingane kaziphephile ngale nto eyenzeka esikoleni, kabufiki ubuthongo zingakafiki emakhaya. “Abanye abazali bayazihlangabeza ebusuku behamba ngezinyawo, abanye abanamandla baziqashela izimoto. Thinake esingenalutho, kufanele simise kanjani?” kusho umzali.
Uveze ukuthi lokhu kukhononda kushayelwa phansi ngoba abazali basaba ukubhekana nothishanhloko, kodwa abafundi batsheliwe ukuthi mabatshele othisha ngokunganeliseki kwabazali ngokuphuma kwabo ebusuku kakhulu. Ethintwa usihlalo wesigungu esilawula isikole, uMnu Sandile Kunene, uthe lufikile ezindlebeni zakhe udaba lokubanjwa inkunzi kwabafundi esikoleni. Utshele ILANGA ukuthi ukufunda kwabo ebusuku akuphoqelekile, waveza ukuthi lesi sikhalo uzosidlulisela kuthishanhloko nesigungu asiholayo. “Abazali kabakaze badlulise ukungathokozi ngokufunda kwabantwana ebusuku.
“Ngicabanga ukuthi bekunga mele bakhononde ngoba ukufunda kwabantwana ngalesi sikhathi esengeziwe, akuyona impoqo. “Uthishanhloko akaze abaphoqe abazali ngalokhu, futhi kawukho umthetho owabekwa wokuthi abantwana mabafunde ebusuku. “Umfundi nomfundi ofunda ebusuku kuyisinqumo sakhe ngoba ekhathalele imfundo yakhe,” kusho uMnu Kunene. Uthi njengoba isikole siphuma ngo-15:15, umatikuletsheni uphume ngo-17h00. Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe bayawugxeka umphakathi ohluleka wukuvikela izingane zawo. “Umphakathi kufanele ubambisane ekuqinisekiseni ukuphepha kwezingane ngoba le mfundo yazo iyosiza wona ngelinye ilanga. “Siyakugxeka kakhulu ukuganga okufana nalokhu ngoba isikole yi-ndawo okungafanele kudlalelwe kuyona,” kusho uMnu Mthethwa.
Previous articleKukhalwa ngesibhaxu ‘esidedelwa osomatekisi’
Next articleUkuthengwa kombhede kukhiphe izidumbu